February 2021 ~ MTJaarraa's Space
This is Mohammed Teklu Jaarraa's Personal Blog
Yaa ilmaan Saba kiyyaa gara tokkummatti wal waama. Tokkummaa labasa labsii dabarsaa! Akka nama Oromoo tokko tti yeroo hunda kan na yaachisu wal dhagahu dadhabuu keennaa fi nama humna qabneef humna taane Ofiin wal gabroomsuudha. Tokkumma yoo isiniin jedhu gabroomfata osoo argitan gad jedhaa fi miti ofii keessani wal hambifadha, waliif quuqama jechuufi malee! Oromiyaa […]
Posted byMTJara February 15, 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Tokkumma Cimsaa!
Galanni Kan Rabbiiti
Lafa dhugaan hin jirretti namaan falmuuf yeroo hin qabnu. Obsa fi waa barachurrattii jabaachudha falli jiru. Rabbiif malee namaaf bakka hin qabu. Insha Allah gaaf tokko dubbuchuudha jirra hunda. Rabbi nama hin gatu. dhugaanis awwaalamee hin hafu.
Posted byMTJara February 13, 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Galanni Kan Rabbiiti
Irri kee midhaaga Keessi kee waan biraa Isa hundaan firaa Yaa dubbi micciiraa Yeroo ammaa kana odeessitun lakkoofsan heddumaata jirti. Namni Kijibu duraan nama hundaan jibbama amma garuu martuu akka waan kijiba aada godhatee namatti fakkaata. Dubbiin tun akkam jechuun hafe jira waan dhagahee ykn “online” tti arge hafarsuu malee dursa addaan baafachuuf yeroo hin […]
Posted byMTJara February 7, 2021 February 7, 2021 Posted inUncategorized1 Comment on Odeesituu Baraa
Nama hin miidhina!
Nama miidhun cubbuudha! Yoomillee taanan namaaf waanuma gaarii yaadudha. Namni waanuma facaafate haamata. Barri keessa jirru kun bars hojiin kamuu harka irratti Galata namaaf deephu. Raajidha kun! Martuu waanuma facaafatan haamachutti jirani. Kumaatama yeroodhaf sobuun salphaadha cubbuun garuu Galata deebisuuf oolte hin bultu
Posted byMTJara February 2, 2021 February 2, 2021 Posted inUncategorized1 Comment on Nama hin miidhina!
Wal hin Arrabsina!
Eric Jones on Odeesituu Baraa
Asha on Nama hin miidhina!
Copyright © 2021 mtjara.com
MTJaarraa's Space, Proudly powered by WordPress.
CONTACT ME mtjara8@gmail.com +251910782410